ကလေးတွေကို ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပြီး အပြစ်မပေးကြပါနဲ့၊ အရမ်းအန္တရာယ်ရှိလို့ပါ. – Burmese.asia
ကလေးတွေကို ထိုင်ထလုပ်ခိုင်းပြီး အပြစ်မပေးကြပါနဲ့၊ အရမ်းအန္တရာယ်ရှိလို့ပါ.
On January 27, 2019 April 18, 2019 By mmhtet
၂၀၀၆ ခုနှစ် တစ်ဦးတည်းသော သားလေး ဦးဏှောက်ကင်ဆာ ရောဂါနဲ့ မန္တလေးဦးဏှောက်နှင့်အာရုံကြော ခွဲစိတ်ကုသ ဆေးရုံကြီးမှာတနှစ်နီးပါးတက်လိုက်ရတယ်
ဆရာဝန်ဆရာမ များအထူးဂရုစိုက် ကုသပေးကြပေမယ့် ၂၀၀၇ နှစ်စ ပိုင်းမှာပဲ ဆုံးသွားခဲ့ရှာတယ် ကလေးဆုံးသွားပေမယ့်ဗဟုသုတ အတွေ့အကြုံ တွေအများကြီးရလိုက်ပြီး ခုထိလည်း လူအများကိုဖြန့်ဝေနေဆဲပါ။
ကလေး ဆေးရုံတက်နေချိန်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဆေးရုံရောက်လာကြရတဲ့ ကလေးတွေထဲမှာ ဆရာမက ထိုင်ထ အပြစ်ပေးခံရတဲ့အတွက်အာရုံကြောထိခိုက်ပြီး
ရောက်လာတဲ့ကလေးတွေ မကြာခဏ တွေ့ရတယ်။ ၆တန်းကျောင်းသူလို့ထင်တယ်။ အတန်းအတိအကျ မမှတ်မိတော့ဘူး မိန်းခလေး တစ်ဦး စာမရလို့ ဆရာမကထိုင်ထ လုပ်ခိုင်းတယ်။ သူထိုင်ထ လုပ်နေစဉ်မှာပဲ ဆရာမက ကျောင်းအုပ်ကြီးက ခေါ်လို့ ရုံးခန်းကိုထွက်သွားတယ်။
ကလေးက ဆရာမ မလာမချင်းထိုင်ထ လုပ်နေရတယ်။ ရပ်ချင်ပေမယ့် ဘေးကသူငယ်ချင်းတွေက ဆရာမ လာရင်စိတ်ဆိုးလိမ့်မယ် ဆက်လုပ်လို့ ဝိုင်းပြောတော့မရပ်ရဲဘူး ဒီလိုနဲ့ကလေးမေ့လဲသွားတယ်။ ဆေးရုံရောက်တယ်။ အာရုံကြောထိ ခိုက်ပြီး မျက်စိနှစ်လုံးမမြင်ရတော့ဘူး ဒါကိုယ်တွေ့ မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်ခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်ထလုပ်တာရုံနဲ့ မျက်စိကန်းတာ ဘာဆိုင်လို့လည်း သိခြင်တော့ ခင်နေတဲ့ ဆရာဝန် ကြီးကိုမေးကြည့်တယ် ဒီလိုတဲ့ လူရဲ့ခန္တာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ဦးဏှောက်ကထိန်းချုပ်တယ်။
ဦးဏှောက်က ဦးခေါင်းခွံနဲ့ရေကြည်လွှာကြားမှာနေတယ်။ အဲဒီ့ရေတွေဟာ ဦးခေါင်းခွံဆီ နားနောက်ကနေ နောက်ကျော ရိုးမကြီးကတဆင့်အာရုံကြော ခေါ်မှာပေါ့ အဝင်အထွက်ရှိ နေတယ်။ နောက်ကျောရုိးမကြီး ကတဆင့် ခန္ဒာကိုယ်အောက်ပိုင်းကို ဒူးခေါင်း တံကောက်ကွေးကနေ အာရုံကြောမကြီး တွေ ဆက်နွယ်ထားတယ်။
ထိုင်ထ လုပ်ပါများ အကြိမ်ရေများလာတဲ့အခါ ဒူးခေါင်းမှတဆင့် အာရုံကြောမကြီးကိုထိခိုက်သွားပြီး အာရုံကြောတွေ ပိတ်ဆို့သွားကာ ဦးဏှောက် လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုထိခိုက်သွားစေတော့တာပါပဲ။
တချို့အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေ ရုတ်တရက် အထမှားရင်တောင် ဦးဏှောက်ကိုသွေးအရောက်နောက်ကျပြီး လေဖြတ်သေတာမျိုးလိုပေါ့လေ။ဒါ ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ရှင်း ပြချက်ကို ကိုယ်ဥာဏ်မှီသလောက်ပြန်ရှင်းပြတာပါ။
ဒါကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုင်ထလုပ်တာမျိုး မပြောနဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်လို့ဆိုပြီး နားရွက်ကိုလိမ်ဆွဲရင် တောင် အခန့်မသင့်ရင် နားနောက်က
အာရုံကြောတွေပြတ်တောက်ပြီး ပိတ်ဆို့သွေးခဲရာကနေဦးဏှောက်ထဲ အကြိတ် တည်တာတို့ ကင်ဆာတို့ဖြစ်နိုင်ပါသတဲ့။ ဒါကတော့ ဆုံးသွားရှာ ပြီဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်သားလေးက သက်သေပါပဲ။
အမတွေ ကြားကတစ်ဦးတည်းသော သားလေးဆိုပြီး ဝိုင်းချစ်လိုက်ကြတာ တွေ့တဲ့သူတိုင်းက ပါးလိမ်ဆွဲ နားလိမ်ဆွဲခဲ့ကြတာ။ဒါကြောင့် ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့
ကလေးတွေကို အ ကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အပြစ်ပေးတဲ့အခါ ထိုင်ထလုပ် ခိုင်းတာ နားနောက်ကိုရိုက်တာ နားလိမ်ဆွဲတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖို့ ရောက်တဲ့ကျောင်းတိုင်း ကြုံတဲ့အခမ်းနားတိုင်းမှာ သတိ ပေးနေရ ပါတယ်။
ငါ့ဖာသာငါ အိမ်မှာ ကလေးကို သေလုမြောပါးဖြစ်အောင် ရိုက်ခြင်ရိုက်မယ်။ ကျောင်းကဆရာမဆိုရင်တော့ ငါ့ကလေးထိ ဓားကြည့့််ဆိုတဲ့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံ
မိဘတွေခေတ်မှာသင်ကြားသင်ယူမှု လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါက်ရောက်အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ဆရာ ဆရာမတွေအနေနဲ့ ကလေးတွေကိုတွန်းအားပေးရတဲ့အခါ အပြစ်ပေးခြင်း ဆိုတဲ့ negative reinforcement ကိုလည်း
မလွဲမရှောင်သာ တခါတလေသုံးရတာမို့ ကိုယ်သတိမထားလိုက်တဲ့ အချိန်အခိုက်အတန့် စက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းလေးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာရော ကလေးဘဝ
ကိုရောထိခိုက်နိုင်တာလေးကို အထူးသတိပြုရင်း စေတနာကို သတိက ဦးဆောင်ပြီး အပြစ်ပေးတတ်ကြဖို့ အကြံပြု လိုက်ပါရစေဗျာ
မှတ်ချက်။ ။ဆေးပညာရှင်များ ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်
PREVIOUS POST Previous post: ဇာဂနာ၊ အရိုင်း၊ ကင်းကောင်၊ ဖိုးဖြူ၊ ငှက်ပျောကြော်တို့ ကပြထားခဲ့ကြတဲ့ “သူတောင်းစားညီလာခံ” ပြဇာတ်video
NEXT POST Next post: ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်တို့ ဇနီးမောင်နှံထံမှ တန်ဖိုးကြီးလက်စွပ်လေး မွေးနေ့လက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့ အောင်လေး